I-NAB Bonisa iindaba nge-Broadcast Beat, u-Broadcast of Broadcasting of NAB Bonisa - NAB Bonisa i-LIVE - Ikhasi 951 - 2019 NAB Bonisa iindaba: Ubunjineli boBume, iTeknoloji kunye neTeknoloji yeeNkcazo kunye neeNdaba zoPhicotho. NAB Bonisa i-2019.
Umncedisi wemveliso mna
Comments Off kuMncedisi weMveliso I
Isikrini somxholo ofana neenkomfa zoonondaba kunye nemidlalo yokudlala-ngawomdlalo oza kusetyenziswa ekusetyenzisweni komoya kunye ne-intanethi, ukunceda abavelisi bemisindo, ukuvelisa imibono yebali, ukubonelela ngezinto zophando, ngamanye amaxesha kuvelise izinto eziboniswayo. Kananjalo inokusebenzisa ibhodi yokulawula yenkqubo ephambi okanye eveliswe kwangaphambili. Uxanduva-Uninzi luphatha ukujonga kunye nokuhlela izinto ezizezona zibalulekileyo, udliwanondlebe kunye nemiba ephezulu yomdlalo yokufakwa kumxholo weqonga kunye namaqonga edijithali. -Ibhodi esebenzayo yolawulo kwimiboniso yeentetho kunye nezinye iinkqubo zerediyo njengoko kufuneka.-Ngamanye amaxesha inceda kulungiselelo lwezinto zokuhlela ze-ESPN Radio on-air kunye / okanye nenkqubo ye-intanethi; isebenza nabasebenzi bomxholo werediyo okanye ngokuzimeleyo ukuqokelela ulwazi lwangasemva kunye nomsindo, kumoya ...
Sijongelela umnxibelelanisi onamava, onamava okuphucula amanqanaba encinci ukuze ancede ekuqhubeni iiprojekthi zevidiyo ezinobunzima ngenkqubo yemveliso. Esi sithuba sifuna indlela yokuziqhubela ngokwayo kunye nokubanela kokulawula isixa esikhulu solwazi. Unokuqonda ngemizobo, iifomathi zedijithali kunye nenqaku levidiyo kwaye unesakhono esihle sokuthetha nokubhala. Indlela yokuqinisekisa kunye nezakhono ezomeleleyo zombutho ziya kuba yimfuneko kwimpumelelo yakho.Uluhlu olungenamkhethe lweemfanelo: -Ukusebenza njengomnxibelelanisi phakathi koMvelisi neqela lokuvelisa elinokubandakanya abaqulunqi, abenzi boluvo, abahleli kunye neqela lokudubula ukuze uqiniseke ukuba iinjongo zokudala ziyenzeka. ..
Nxibelelana noMvelisi weLayini mihla le malunga nemeko yesebe.Lungelelanisa ukuhanjiswa komsebenzi kuzo zonke iisuphavayiza kunye namagcisa kwisebe le-CG.Keephume nolwazi oluchanekileyo lwansuku zonke kuwo onke amasebe, kwaye kunyanzeliswe ixesha elibekiweyo.Ulumkiso lwe-LP lweengxaki ezinokubakho kwaye ucebise ngezisombululo ezifanelekileyo.Ukuseza isitshixo abasebenzi bemveliso kwimeko yazo zonke iindawo zemveliso.Lazi kwaye usasaze ishedyuli yemveliso yeveki ngolwazi oluchanekileyo kulawulo oluphezulu kunye nabasebenzi bemveliso.Iintlanganiso zesebe zaphakathi evekini.Umlungelelanisi wemveliso (wabasebenzi) kunye nabaNcedisi boMveliso; ncedisa uMvelisi weLayini ekuqeshweni, kuhlolo lwentsebenzo kunye nokupheliswa kwezi zikhundla .Okulungiselela ukwenziwa kwezinto kulungiselelwa ukuthunyelwa.Ishedyuli yolawulo yokuqinisekisa ukuvelisa kuyahlangabezana nemihla emiselweyo. Ezinye zezi ...
I-KEYE TV e-Austin, eTexas ijonge uManejala weMveliso yoRhwebo. Izinto ezifunekayo: Kufuneka ubunamava ubuncinci beminyaka ye-2 yokulawula isebe lemveliso kamabonwakude. Mkhonze njengomcebisi wemveliso kubaphathi beAkhawunti nabaxumi ukulungiselela iimfuno zabo zemveliso. Yenza ingxoxo, bhala, uvelise kwaye uhlele iindawo zentengiso zabathengi bezikhululo. Yongamela umsebenzi wemihla ngemihla wokuvelisa kwabahleli kwaye usebenze ngokudibana nabaxumi kunye nee-AE. Khonza njengomvelisi wemihlaba kwindawo esekwe kwezorhwebo kunye nasemajukujelweni enkqubo. Ukulungelelanisa nokulawula ubudlelwane nabaxumi, abavelisi bangaphandle, amagcisa elizwi, kunye netalente. Iziqinisekiso zemfundo: Kufuneka sibe nakho ukwenza izicwangciso zokuthengisa kunye ...
UMlawuli / uBunjineli
Comments Off kuMlawuli / kubuNjineli
Ukunika ingxelo kwi-Ofisi kaMongameli, ukuSebenza koMlawuli, ezobuNjineli lelinye eliphambili kubasebenzi beqela leqela elisebenzayo elinika ingxelo kwaye lixhasa i-VP. UMlawuli, uBunjineli yinkokeli yobunjineli enobunzulu bobuchwephesha kunye nengcinga; Umsebenzi okwinqanaba eliphezulu kunye nomphathi onoxanduva ngqo ekusebenzeni kakuhle nasekujongeni zonke izixhobo ezisebenza ngoomatshini, zombane kunye neepomitha (MEP) nemisebenzi. Uya kukhokela kwaye alawule yonke imisebenzi enxulumene nendawo kubandakanya ulwakhiwo kunye nolondolozo lwemihlaba, ubunjineli kunye nokuthotyelwa kwemigaqo. Esi sikhundla silawula, sikhokela ukusebenza kwabasebenzi be-10-12. Ukucwangciswa okuphezulu kunye nezakhono zokuphunyezwa zizinto ezifanelekileyo ...
Incedisa abavelisi ekulungiseleleni iinkqubo zokuphonononga kunye nokuphila kwiTV yeNcwadi. Ukulungisa amashiti okwenyani kunye nemizobo yeetayile zomnyhadala wencwadi phantsi kolawulo loMvelisi. Iigogo kunye nemicimbi yencwadi. Iindidi zemizobo kwaye zisebenzise zonke iinkqubo zobuchwephesha ezisetyenziswa yiNcwadi yeTV kunye neC-SPAN. Isidanga se-Bachelor kwi-Journalism, Science Science, Imbali, isiNgesi okanye iRadio / TV. Ubuncinci unyaka omnye wamava afanelekileyo omsebenzi owuthandayo. Ulwazi olomeleleyo kunye nomdla kwiincwadi ezingezizo iintsomi kunye nomgaqo-nkqubo woluntu. Inqanaba lokuthuthuzela eliphezulu ngokusetyenziswa kweekhompyuter kunye neenkqubo ezahlukeneyo zesoftware. Ukuvumelana nezimo ngokusebenza kweeshedyuli ezahlukeneyo, kubandakanya iimpelaveki kunye neengokuhlwa. Ukuqonda kwenkqubo yeC-SPAN kunye nefilosofi. Inokutshintshwa ukuze itshintshe izinto eziphambili ngokubaluleka. Ukwazi ...
Imveliso yangaphakathi yeNkampani yoNyaka
Comments Off kwiNkampani yeMveliso yoLwazi lwaNgaphakathi
Ukufuna umfundi wefilimu / wevidiyo onomdla ngokukhethekileyo kwimveliso yokuLungiselela indawo yokufundela engahlawulelwanga kwinkampani yethu yefilimu, iTV kunye neArhente yeMveliso eHermanosa Beach, CA. Isikhundla siza kubandakanya ukuncedisa kuphuhliso lweeprojekthi ezikhoyo, isikhundla kwimveliso ngexesha lokuvelisa iiprojekthi ezizayo, uphando malunga nezinye iiprojekthi. Isikhundla siza kusebenza ngokukodwa kunye noMnini kunye noMvelisi oLawulayo wenkampani. Kufuneka ube nemoto yakho, ilaptop kwaye icwangciswe kakhulu. Iiyure / iintsuku ziyaguquka.
Comments Off kuMphathi weMveliso yeVidiyo
Iqela le-GameSpot Live liqela lethu lemveliso ye-teknoloji yangaphakathi, enoxanduva lwayo yonke imiba yokwenza into yokuHanjiswa kweSigaba, ukusasazwa okubukhoma, kunye nokugubungela umcimbi. Umphathi weMveliso yeVidiyo uya kuthatha inxaxheba kuyo yonke imveliso yokuvelisa ividiyo, kubandakanya ukugcina iishedyuli, uhlahlo-lwabiwo mali, iimvumelwano, kunye neentlawulo, kunye nobugcisa, umculo kunye nempahla yevidiyo yentengiso, kunye nezicwangciso zentengiso. Konke oku kwangaxeshanye kukukhululeka kunye nezinto zobugcisa zemveliso ye-multimedia yemo engqongileyo ye-Intanethi. Uya kuba nomnqweno wenkqubo, ukubhala kunye nokucwangciswa kwemveliso kunye nokuqonda okunzulu kwenkqubo yoyilo. Uxanduva: Dala kwaye ...
UMPHATHI WEMveliso YOKUGQIBELA EBALASELEKILEYO
Comments Off KUMLUNGU WOKUGQIBELA WENDAWO YOKUFUNDA
Idigriji yasekholejini kunye namava ubuncinci beminyaka ye-3 yamava kwimo yokusebenza kwevidiyo yedijithali. Amava okusebenza ngamaqonga obuchwephetsha obutsha kunye / okanye iimveliso zokuzonwabisa ekhaya ezinqwenelekayo .- Kufuneka ube nezakhono ezigqwesileyo ze-Ofisi ye-MS, ngakumbi kunye namaphepha e-Microsoft Excel. Ifuna izakhono ezomeleleyo zesebe kunye nokubanakho ukwenza imisebenzi emininzi kwindawo enomthamo omkhulu, okhawulezayo wokuhamba ngokukhawuleza. -Ukuqwalaselwa okugqwesileyo kwiinkcukacha kunye nokusebenza ngokuchanekileyo kufuneka. Kufuneka ube ngumnxibelelanisi wexesha oziqalelayo kunye nomhla obekiweyo.
UMLawuli, IMveliso kunye nokuZalisekiswa
Comments Off kuMlawuli, IMveliso kunye nokuZalisekiswa
Isidanga kwiShishini okanye kwiAccounting okanye kumhlaba onxulumene noko ukhetha i-3 ukuya kwi-5 iminyaka yamava omsebenzi, abane abathengisi.- Kufuneka ube nezakhono ezihle kakhulu kunye nezingaphambili kwi-Excel. Amava ngePeoplesoft, i-Quickbooks kunye neFayilemaker kunye.Imele ibe yeenkcukacha kakhulu kwaye icwangciswe. Kufuneka ube nesakhono sokwenza uphando olunzulu, uhlalutyo lweakhawunti kunye noxolelwaniso .- Kufuneka ikhuthazwe kwaye ithembeke, ikwazi ukusebenza ngokujonga umkhondo kunye nokubeka esweni; Ukwazi ukubeka phambili umthwalo womsebenzi, ukulawula ixesha ngokufanelekileyo kwaye uhlangabezana nexesha elimiselweyo.Ukuchonga iingxaki, ukuvelisa izisombululo kunye nokuthatha amanyathelo okusombulula imiba kwimimandla eluxanduva lwakho.
- Ukudala kunye nokugcina ukubethelwa kweprojekthi- ukufumana iindleko zokuqala zomsebenzi- ukufumana iindawo- ukuhlengahlengisa abasebenzi kunye nezixhobo- ukwenza amalungiselelo okuhamba- ukuphendula izicelo zabathengi kunye neqela- ukwenza amashiti emibuzo- ukuqokelela iirisithi zeprojekthi- ukulandelela inkcitho yeeprojekthi- ukulandelela iindleko ngexesha kwentlanganiso zokuvelisa kunye Iminxeba yenkomfa- ukuhlengahlengisa iiprojekthi zokuhlela- ukuthumela ukuthumela ukujonga-ukulandela umkhondo / ukuhambisa izimvo zabaxumi- ukuncedisa umvelisi ngeprojeki yiprojekthi- Ukucwangciswa okuphezulu kunye nokugxilwe kwiinkcukacha- Ukwazi ukujongana (kwaye nokonwaba) kwiimeko zoxinzelelo ngokuzola, ubabalo, uburharha kunye ububele Umphulaphuli olungileyo onandipha ngokwenene abanye abantu kwaye ufuna ukubanceda- Ubuncinci bamava eminyaka eyi-2 yamava asebenza kwimibhalo ebhaliweyo okanye yokuthengisa kunye / okanye neprojekthi ...
-UPhando -Ukunika ingxelo - Ukubhala - Ukufumana ividiyo -Uku-odola kunye nokwakha iigrafikhi - Ukufaka kunye nokuhlela ividiyo-Ukwenza kwaye kuthunyelwe amabali kwiakhawunti yeendaba zewebhu kunye neendaba ezosasazo-Ukufaka iifayile kunye nokuphawula iingxelo eziphambili kwiividiyo nakumajelo eendaba ezoluntu-Ukuhlela ividiyo yocwangciso lwewebhu - ukuthengisa kwencwadana yezopolitiko kufuneka ube ngumfundi wekholeji ononyaka onamava kwishishini leendaba. Abafakizicelo kufuneka babe nolwazi olomeleleyo lweziganeko zangoku kwaye babonakalise ukugwetywa kweendaba. Isikhundla sifuna ukuba babe bhetyebhetye, ukucinga ngokukhawuleza, amandla okuzilawula kunye nokuthatha isikhokelo. Mayibe ...
I-San Diego Opera ifuna iMveliso yangaphakathi ukuze isebenze nabalawuli beqonga kwinqanaba lethu le-2014 elizayo. Isikhundla siqala ekuqaleni kukaDisemba 2013 kwaye sihamba phakathi phakathi ku-Epreli 2014. Imbuyekezo ibandakanya inqanaba leeyure (kunye nexesha elongezelelweyo), izindlu, uncedo lokuhamba. Imveliso yovavanyo isebenza ngokuthe ngqo nabasebenzi boLawulo lweMigangatho, abadlali kunye neqela labasebenzi. Inkqubo yemihla ngemihla ihamba ngokukhawuleza, kodwa imisebenzi iyahluka mihla le. Kufuneka ube bhetyebhetye nezakhono zokufunda ngokukhawuleza. Ngokufanelekileyo, umgqatswa unezakhono zokufunda umculo oqinileyo kunye namava athile olawulo kwinqanaba.
UMPHATHI WENKQUBO YOKWENZA IMveliso
Comments Off kuMLawuli WENKQUBO YOKWENZA IMveliso
-Sebenzisana ngokuphuhlisa nokulawula isicwangciso seprojeki kunye nokusebenza ngesikhokelo sokuziphatha kunye namaqela eeprojekthi ukwenza kwizicwangciso-Ukubeka iliso kwimisebenzi yemihla ngemihla yeprojekthi kunye nokuqinisekisa ukuba umsebenzi uqhubela phambili njengoko ucwangcisiwe-Ukulawula ishedyuli, ii-asethi, kunye nombutho opheleleyo weprojekthi Qinisekisa iimfuno kunye nemihla yokuhanjiswa kweprojekhthi icacisiwe ngokucacileyo, iqondwe kwaye isenziwa ngokufanelekileyo nangokucwangcisiweyo kwaye ibeka phambili zonke izinto ezinikezelwayo ezisebenza kuyo yonke iprojekthi (ngokusekwe kubungakanani bomsebenzi, iinjongo zeprojekthi, kunye nolwalathiso loMlawuli weCreative-Ngokuchonga iimfuno zokudala, ukuThengisa , kwaye Amashishini anokuvuma kwaye aqinisekise ukuba iindlela kunye nezisombululo zidityaniswe kwiinjongo kunye neemfuno zexesha elizayo-isiDanga seDigri kunye ne3-5 + yamava eminyaka ...
P / T KuMoya / kwimveliso
Comments Off kwi-P / T kwi-On-Air / Imveliso
Imithombo yeendaba ecacileyo ye-Media + Ukuzonwabisa kukusukela ubuntu emoyeni! Njengomgcini wasemoyeni injongo yakho kukutsala umdla wabaphulaphuli berediyo yesikhululo sikanomathotholo kunye nee-asethi zedijithali ngeendlela zokuzonwabisa ezihambelana nefomathi yomculo nesitishi. Ngaphakathi kule ndima, kuyakufuneka ukuba ube nolwazi kumacandelo onke eemveliso zerediyo, kubandakanya ukuhlelwa komsindo, ukurekhoda kunye nokusebenza ngokusondeleyo nesitishi soMlawuli weNkqubo.Ukufumana izakhono kwi-AirAdhere kuzo zonke izikhokelo, imigaqo-nkqubo kunye neenkqubo zesikhululo, kucacile. I-Channel yezoNxibelelwano, Inc., i-FCC kunye nayo yonke eminye imibutho yaseburhulumenteni, yezwe kunye neyasekhayaImigaqo elungiselelwe ngokufanelekileyo ...
Umgcini zincwadi zemali ophambili
Comments Off kwi-Key Production Accountant
Inkampani yokuvelisa umabonwakude ye-NYC ifuna uMgcini zincwadi oMkhulu woVavanyo ukujongana nayo yonke imiba yezemali, kubandakanya nokulawula i-GL, A / P, A / R, ukuphathwa kwemali, iingxelo zeendleko, ukuhamba kwemali, ukubhatala, iingxelo zemali, ukuhlalutya kwengxelo yemali, uxolelwaniso lwebhanki kunye ingxelo yerhafu kwimiboniso emininzi. Ulwazi olomeleleyo lweVista, uMlingo weMidlalo yeVidiyo, i-Excel efunekayo kunye namava kunye neqela eliphambili elihlanganisiweyo lokudibanisa Kufuneka abe nolwazi olusebenzayo lwemveliso kamabonakude, izakhono ezomeleleyo zokunxibelelana kunye nokunxibelelana nabanye, kwaye kufuneka abe nakho ukubeka phambili imisebenzi ngokufezekileyo kwindawo ekhawulezileyo ekhokelayo. Umfaki-sicelo makabe namava weminyaka emihlanu njengophicotho lwemveliso ophambili. Idigri ...
Umlungelelanisi wemveliso, ukuKhuthaza emoyeni
Comments Off kuMlungelelanisi wemveliso, ukuKhuthaza emoyeni
-Imisebenzi yokulawula ye-VP yokunyusa umoya kunye nokusebenza njengomphathi weofisi kwisebe. -Ukutya kwemihla ngemihla kwangaphambili kunye nokugqitywa kwephromo. -Faka kwaye uvuselele ulwazi lokuhambisa umyalezo kwi-database kwaye usasaze kabini yonke imihla. Izicelo-dub -Oversee dub kunye nokuhanjiswa kweetayile ngeFedEx okanye ukuhanjiswa kwidijithali. -Ukuhanjiswa okuthe kratya kokuthengwa kwentambo kunye nentengiso yendlela enqamlezayo. Ii-invoice zeprojekhthi kunye nokubeka esweni uxolelwaniso lwekhadi leP. -Oversee veki yomxokelelwano kunye nokusasazwa. Ukufakwa kunye nokugcinwa kweekhompyuter, iiprinta, iifowuni kunye nomabonakude. Ikhalenda yomnxeba wolwazi kunye nokujonga ucwangciso lwevidiyo. -Umlinganiso on-moya wokuvelisa ingxelo yekhalenda kunye neeshedyuli zokuqhuba iintlanganiso. -Lungelelanisa yonke veki kunye nabasebenzi biweekly ...
Inkqubo ehambelanayo kuzwelonke ifuna uMlungelelanisi wemveliso yokuNamava onamava. Kufuneka ube ubuncinci ngamava eminyaka ye-1. Uxanduva oluphambili lubandakanya ukulungelelanisa ukudalwa kunye nokuhanjiswa kwezinto zokwenza umboniso, ukugcina ishedyuli yomoya kunye nokubeka iliso ekuhanjisweni kwezinto eziphindiweyo. Abafaki-zicelo kufuneka belungelelaniswe, banonophele ingqalelo kwiinkcukacha, bakwazi ukunxibelelana kakuhle nabanye kwaye bekhululekile kwindawo ekhawulezileyo ekhawulezileyo. Kufuneka ubenako ukuba ungqinisise iincwadi zegrama kunye neempazamo zopelo. Izakhono zobugcisa ziyinto yokudibanisa.
Page 951 of 955" Ekuqaleni...920930940«949950951952953»...Last »
Iingxelo zoLondolozo Khetha inyanga NgoSeptemba 2019 (298) Agasti 2019 (400) Julayi 2019 (286) Juni 2019 (264) Meyi 2019 (273) Epreli 2019 (503) Matshi 2019 (622) NgoFebruwari 2019 (325) NgoJanuwari 2019 (280) Disemba 2018 (243) Novemba 2018 (406) Oktobha 2018 (496) NgoSeptemba 2018 (495) Agasti 2018 (397) Julayi 2018 (876) Juni 2018 (869) Meyi 2018 (871) Epreli 2018 (831) Matshi 2018 (779) NgoFebruwari 2018 (684) NgoJanuwari 2018 (605) Disemba 2017 (396) Novemba 2017 (712) Oktobha 2017 (835) NgoSeptemba 2017 (608) Agasti 2017 (583) Julayi 2017 (710) Juni 2017 (543) Meyi 2017 (621) Epreli 2017 (695) Matshi 2017 (704) NgoFebruwari 2017 (340) NgoJanuwari 2017 (364) Disemba 2016 (606) Novemba 2016 (344) Oktobha 2016 (556) NgoSeptemba 2016 (622) Agasti 2016 (1056) Julayi 2016 (532) Juni 2016 (414) Meyi 2016 (505) Epreli 2016 (713) Matshi 2016 (743) NgoFebruwari 2016 (382) NgoJanuwari 2016 (123) Disemba 2015 (357) Novemba 2015 (327) Oktobha 2015 (152) NgoSeptemba 2015 (259) Agasti 2015 (440) Julayi 2015 (276) Juni 2015 (140) Meyi 2015 (128) Epreli 2015 (435) Matshi 2015 (289) NgoFebruwari 2015 (298) NgoJanuwari 2015 (131) Disemba 2014 (103) Novemba 2014 (194) Oktobha 2014 (149) NgoSeptemba 2014 (381) Agasti 2014 (250) Julayi 2014 (287) Juni 2014 (363) Meyi 2014 (231) Epreli 2014 (744) Matshi 2014 (560) NgoFebruwari 2014 (427) NgoJanuwari 2014 (289) Disemba 2013 (137) Novemba 2013 (545) Oktobha 2013 (290) Julayi 2013 (26) Meyi 2013 (13) Epreli 2013 (1) Matshi 2013 (2) 0 (306)